रेसुङ्गा बिमान स्थलबारे काँग्रेस नेता भण्डारीको प्रतिकृयापछि सरोकारवालाहरुबीच वाकयुद्ध शुरु ! – ebaglung.com
२०७५ जेष्ठ २७, आईतवार १२:५५	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७५ जेठ २७ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पुर्व सांसद चन्द्र भण्डारीले हालै परिक्षण उडान भएको रेसुङ्गा विमान स्थलका वारेमा प्रतिकृया दिएका छन् । उनले आफ्नो फेशवुक मार्फत प्रतिकृया दिदै भनेका छन् –‘ विमान स्थल ढिलाई हुनुको कारण सीमित ब्यक्तिले एअरपोपोर्ट निर्माण परियोजनालाई दुहुनो गाई बनाएका कारण ढिलो हुन गएको हो ।
पछि कमसल काम गरेको ठहर गरी नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणले जरिवाना तिरायो । यो विमान स्थल छिटो नै बन्ने थियो । रकमको अभावले होईन । गुल्मेली जनता परीक्षण उडानबाट खुशी छन अव बेखुशी बनाउनु हुँदैन । घरको कोठामा ठेकेदार पालेर कमसल काम गर्न पाईदैन ।
उनले ब्यङ्ग गर्दै भनेका छन्–‘ नाम पनि, दाम पनि कमसल काम पनि । भ्रष्टचारको छानविन एकदिन हुनेछ । आफ्नो कामको लागि जनता सचेत हुनु पर्छ । उनले ‘घरको कोठामा पालेर’ भन्ने भनाईले त्यस विमान स्थलमा निर्माण कार्यको जिम्मा लिएका नारायणप्रसाद पोखरेललाई ईङ्गित गरेका हुन ।
चन्द्र भण्डारी धूर्त हुन : पोखरेल
नेता भणडारीले निर्माण ब्यवसायी पोखरेल माथी लगाएको आरोपका सम्वन्धमा पोखरेलले कडा प्रतिकृया दिए । उनले भने–‘ पहिलो कुरा त चुनावी हारले चेतना समेत गुमाउन खोजी सकेका चन्द्र भण्डारी जस्तासंग जवाफ–सवाल मलाई गर्ने मनै छैन । कुनै ब्यक्तिको नीजि जीवन र उसको ब्यवसाय संग पटक पटक धावा वोल्नु, आक्रमण गर्नु भनेको चेतना नभएकै मान्छेले गर्छ । उनि धूर्त मान्छे हुन । धुतर््याँई गर्न कै लागि हामी निर्माण ब्यवसायीहरुलाई पटक पटक उनले आक्रमण गर्दै आएका छन् । मलाई त पार्टी कार्यालयको भवनमा डेरा गरी बस्छ भनेछन् । उनले प्रतिप्रश्न गरे – चन्द्र भण्डारी चाँही काठमाण्डौमा कसको घरमा बस्छन् नि ?
उनले फेरी नेता भण्डारीलाई प्रहार गर्दै भने–‘ होईन मान्छेको ब्यक्तिगत जिवन संग खेलवाड गर्ने कस्तो मानसिकता होला उहाँको ? उनले थपे–‘ जहाँ सम्म त्यस विमान स्थलको हकमा प्रतिष्पर्धा गरेर मैले जिम्मा लिएँ । सम्झौता भएको मिति अघि नै मेरो जिम्मामा नभएको काम समेत गरे. ।
पैसा हालेँ भनेर नाक ठाडो नपारे हुन्छ- सचिव
त्यस समितिमा तत्कालिन एमालेबाट अध्यक्ष रहेका मधुकृष्ण पन्त संग नेता चन्द्र भण्डारीको फेशवुक मार्फत आएको प्रतिकृयाबारे ध्यानकृष्ट गराउँदा
उनले थपे–‘ अरुले जस्तो अशिष्ट र अपाच्य भाषा मैले प्रयोग गर्न चाहन्नछ । यति भन्छु कि उहाँको आरोपको कुनै अर्थ र औचित्य छैन ।’अध्यक्ष विमान स्थल शुभारम्भ समारोह मैं अध्यक्ष पन्तले सवै आर्थिक विवरण सार्वजानिक गरेका थिए । त्यस आर्थिक विवरणमा साविकको जिविस, केहि गाविस सहित नेता भण्डारीले भने भन्दा बढि नै रकम परेको छ ।
जिसस उपप्रमुख भुसालव्दारा रिघाफेँदी लिफ्टिङ खानेपानी योजनाको उद्घाटन !